China lamba akrilika mora matt ambonin'ny mpanamboatra sy mpamatsy | Gokai
Fanoloran-tena amin'ny kalitao 10 taona niainany tamin'ny fanontana sy fanondranana, azontsika tsara izay tadiavin'ny mpanjifanay. Ny kalitao no zavatra voalohany amin'ny orinasanay. Tsy maninona ho an'ny filaminana kely na asa lehibe, mitazona fomba fifehezana kalitao mitovy izahay. Manana mpiasa 4 QC izahay hanamarina ny kalitaon'ny baiko rehetra alohan'ny fandefasana.
hakitroky 1.2g / cm3
hateviny 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm ...... hatramin'ny 50mm
Loko Ny loko rehetra dia tsy maninona, toy ny mazava, mangatsiaka, opal, fotsy, mena, manga, mainty, mainty sy fotsy, andro alina, fitaratra, sns. Afaka manamboatra ihany koa isika
loko namboarina mifototra amin'ny fepetra takinao manokana.
ara-nofo Akora Mitsubishi virijiny 100%
Kalitao Ny takelaka acrylic ataontsika dia mifanaraka amin'ny mari-pahaizana CE / SGS
MOQ 2 taonina na paleta hazo iray
Vokatry ny herin'ny vokatra
Temperature distorsian'ny hafanana
Temperature mamorona hafanana
Coefficient amin'ny fanitarana Thermal linear
Sitrana rano (24HRS)
1. fanamboarana: varavarankely, varavarankely sy varavarana tsy misy feo, saron-tava fitrandrahana, trano heva sns.
2.ad: boaty maivana, famantarana, signage, fampirantiana, sns.
3. fitaterana: lamasinina, fiara sy fiara hafa, varavarana sy varavarankely
4. Fitsaboana: incubator zaza, fitaovana fitsaboana isan-karazany
5. ny entam-bahoaka: toeram-pidiovana ara-pahasalamana, asa-tanana, tarehy, tarehy, tanky sns
Takelaka akrilika tafaporitsaka 4ft x 8ft ravina akrilika
(Tsy ho an'ny fanapahana mari-pana ambony sy ireo milina laser)
1.Fampitana hazavana tsara. cas miloko
2. fanoherana ny toetr'andro. ravina mareva-doko feno plexiglass
3. Afaka hamolavola sy hamboarina indray.
Fampiasana 4.Wide tsara, mora fandokoana sy fandokoana.
5. tsy poizina. ravina mareva-doko feno plexiglass
6.Tanjaka mekanika avo.
7. lanja maivana. ravina mareva-doko feno plexiglass
8.Faherezana mahery vaika. ravina mareva-doko feno plexiglass
9. Endri-javatra tsara insulation, be mpampiasa amin'ny fitaovana elektrika isan-karazany.
10. tsara tsara coating sy ny fanoherana fanoherana
11. fanoherana simika tsara, ambony noho ny ankamaroan'ny akora plastika hafa.
12.Mora ny manadio sy mitazona.
1.Ny fanoloran-tena amin'ny kalitao 10 taona niainany tamin'ny fanontana sy fanondranana, azontsika tsara izay tadiavin'ny mpanjifanay. Ny kalitao no zavatra voalohany amin'ny orinasanay. Tsy maninona ho an'ny filaminana kely na asa lehibe, mitazona fomba fifehezana kalitao mitovy izahay. Manana mpiasa 4 QC izahay hanamarina ny kalitaon'ny baiko rehetra alohan'ny fandefasana.
2.Ny vidin'ny fifaninanana Azontsika atao ny mandresy ny teny nalaina tamin'ny 10% latsaka. Miara-miasa foana izahay sy ny mpanjifanay mba haharesy amin'ny fandraharahana bebe kokoa amin'ny vidiny mifaninana. Satria mitady mpiara-miasa maharitra izahay, tsy asa indray mandeha ihany.
Fandefasana 3.Fast mpanjifa rehetra mendrika serivisy mahomby. Miasa 24 ora miaraka amina 3 miova izahay, ho an'ny pirinty ao anatin'ny 1000 metatra toradroa, afaka mandefa ao anatin'ny 3days. Ho an'ny habetsahana lehibe kokoa dia manome haingana kokoa noho ny nandrasan'ny mpanjifanay foana izahay.
F1: Mandra-pahoviana amin'ny fotoana famokarana?
A: Manodidina ny 20 andro vao mahazo ny petra-bola isika.
F2: Ahoana no hifehezana ny kalitao?
A: Manana ekipa QC mifanaraka amin'ny TQM izahay, ny dingana tsirairay dia manaraka ny fenitra. Mandritra izany fotoana izany, haka sary izy ireo ary handefa horonantsary ho anao.
F3: Ahoana ny famahana ny olan'ny kalitao aorian'ny varotra?
A: Raiso ny sarin'ireto olana ireto ary andefaso aminay Aorian'ny fanamafisanay ny olana, afaka telo andro dia hanao vahaolana afa-po ho anao izahay.
F4: Ahoana no hanamafisana ny kalitao aminay alohan'ny hanombohana ny famokarana?
A: 1) Afaka manome santionany izahay ary afaka misafidy iray na maromaro ianao, ary avy eo manao ny kalitao mifanaraka amin'izany.
2) Alefaso aminay ny santionanao, dia hataonay araka ny kalitaonao.
Teo aloha: ravina akrilika fanala
Manaraka: ravina acrylic manjelanjelatra
acrylic ravina 2mm
taratasy akrilika opaque fotsy
ravina acrylic mangarahara avo
ravina acrylic fotsy milky
fonosana akrilika aquarium